टिकटक, पब्जी र फ्रिफायर तुरुन्तै बन्द गर्न अदालतको आदेश ! – Sandesh Press
September 22, 2021 844
टिकटक, पब्जी र फ्रिफायर तुरुन्तै बन्द गर्न अदालतको आदेश ?
बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने किसिमका अनलाईन गेम र एपहरु तत्काल प्रतिबन्ध गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
अदालतले यस्ता गेम र एपमाथि प्रतिबन्ध नलगाउनुको कारण १० दिन भित्र पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।*
युवा र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने एपमाथि प्रतिबन्ध लगाउनको लागि सिफारिस गर्ने गरी प्रविधि विज्ञ, शिक्षाविद् र अधिवक्ताहरुको समिति गठन गर्न बंगलादेशी बंगलादेश टेलिकम्युनिकेसन एण्ड रेगुलेसन कमिसन (बीटीआरसी) लाई आदेश दिनको लागि पनि रिट निवेदकहरुले माग गरेका छन्काठमाडौँ । मधुमेह अर्थात (सुगर) चिनी रोग मानव स्वास्थ्यका लागि एक चुनौतिको रुपमा रहेको रोग हो। मधुमेह स्वास्थ्यका लागि निकै खतरनाक हुन्छ। तर, मधुमेहको सुरुवाती लक्षणलाई पहिचान गर्न सकियो भने सामान्य रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
Prevपेटमा छोरा छ कि छोरी जान्न चाहानुहुन्छ ? यस्ता देखिन्छन् लक्षण !
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज ७ गते बिहिबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेन्रुहोस राशिफल